अभिनेत्री ऋचाको यस्तो चाहना कहिले पुरा होला ? |
अभिनेत्री ऋचाको यस्तो चाहना कहिले पुरा होला ?
24 February, 2017 | Bhawana Pathak | 1100 Views | comments
अभिनेत्री ऋचा शर्माले प्राय सिनेमामा फरक भूमिका निर्वाह गरेकी छिन् । उनले निर्वाह गरेका भूमिकालाई दर्शकले मन पनि पराएका छन् । गत वर्ष ‘को आफ्नो’ मा उनको रुप देखेर दर्शक अचम्म मात्रै परेनन् कति त तर्सिए पनि ।
तर सिनेमाले भने खासै कमाल गर्न सकेन । ऋचाले जति पनि सिनेमामा काम गरेकी छिन् प्राय फरक भूमिका मै देखिएकी छिन् । उनले अहिले सम्म धेरै अवतार देखाईसकेकी छिन् । तर ऋचाको एउटा ईच्छा भने अहिले सम्म पनि पूरा भएको छैन ।
उनलाई अब एक्शन लेडीको रुपमा सिनेमामा काम गर्न मन छ । त्यसको लागि उनी आफ्नो शरीर पनि फिट भएको महसुस गर्छिन् । उनले सिनेमा चक्करमा पुलिसको भूमिका निभाएकी छिन् । तर उनले त्यसमा चाहेजति एक्शन गर्न भने पाईनन् । उनको यो सिनेमा रिलिज हुन बाँकी छ ।
तर अब उनलाई पूर्ण रुपमा एक्शन अवतारमा देखिन मन लागेको छ । उनले यो कुरा ‘लुट–२’ को प्रमोशनको क्रममा मिडियासँग सेयर गरेकी हुन् । शारीरिक व्यायाममा ध्यान दिने उनी जिम जान कहिल्यै पनि छुटाउँदिनन् । त्यस्तै उनले आफूलाई कमेडि भूमिकामा पनि देखिन मन भएको खुलाएकी छिन् ।
उनी कुनै पनि सिनेमामा लामो भूमिका चाहन्नन् । उनलाई छोटो भूमिका भएपनि आफूलाई सुहाउने भए पुग्छ । उनले आफ्नो सिनेमा ‘लुट’ मा पनि खासै लामो भूमिका थिएन र ‘लुट–२’ मा पनि नभएको खुलाएकी छिन् । तर ‘लुट–२’ मा उनको महत्वपूर्ण भूमिका भने छ ।
#अभिनेत्री ऋचाको यस्तो चाहना कहिले पुरा होला ?